Akuwona Umzamo Omangaza Abantu | Martech Zone
NgoLwesibili, Agasti 22, 2006 NgoMsombuluko, Agasti 24, 2009 Douglas Karr
Umthuthukisi omkhulu emsebenzini wami namuhla uveze umbiko omusha abewubhalile ngempelasonto. Ungumbiko omuhle, owakhiwe ngezinsizakalo zokubika ze-SQL, wenza kahle, unembile, futhi uhleleke kahle.
Njengoba sikhipha lokhu kubantu bethu bangaphakathi, unjiniyela wathi abantu benkampani bazomangala, kepha abanye onjiniyela bazothola ukuhleka ngoba bayazi ukuthi bekulula kangakanani ukuhlela lo mbiko. Labo abanye onjiniyela bangahle bahleke, kepha akubona abathola ukunakwa.
Ngiphendule kunjiniyela ukuthi akuwona umzamo omangaza amaklayenti ethu noma abasebenzi bethu. Abazi nakancane ukuthi kudingekani ekusithekeni ukwenza izinto zisebenze. Futhi abanandaba (njengoba kungafanele) inqobo nje uma kusebenza. Yimibono, isinyathelo, futhi ikakhulukazi umthelela omangaza abantu. Umsebenzi onzima unendawo yawo, ungangizwa kabi. Njengoba ngikhula, noma kunjalo, ngibona abantu abaningi abakhushuliwe, abaphumelelayo, noma abacebile - hhayi ngoba basebenze kanzima, kepha ngoba banemibono emihle, ukuzimisela okukhulu, noma umthelela omkhulu.
Kuyi-IDEAS, INITIATIVE, futhi ngaphezu kwakho konke, IMPACT emangaza abantu - hhayi umzamo.
Lokho akusho ukuthi angisebenzi kanzima. Ngisebenza njalo - ibhulogi yami empeleni iyikhefu lansuku zonke kimi. Ngokudla kwasemini nokuhambahamba ntambama, sonke isikhathi sami ngisebenza, ngisembhedeni, ngifunda, noma isikhathi nezingane zami. Ngiyawuthanda umsebenzi, yingakho ngiwenza. Angicabangi nje ukuthi kufana nezinsuku ezinhle lapho kusebenza khona kanzima. Sekude kakhulu lezo zinsuku! Ukusebenza kanzima kungazikhokhela izikweletu, kepha akukuhle ngokuhamba kwesikhathi. Konke ozoba nakho ekupheleni kwempilo yakho yinqwaba yomsebenzi owenziwe.
Umsebenzi walo njiniyela kungenzeka ukuthi awuthathanga mzamo omkhulu - kepha umbono wakhe, isinyathelo sakhe sokwenza lokho, nomthelela ozoba nawo kumakhasimende ethu kuzoba yinto yonke inkampani ezuza kuyo.